Wejiga dhoolacadeynta ayaa u fiican Kanada Jetlines | Abuurista khadka tooska ah
Amazon waa boqorka dhoolla caddaynta oo leh astaantiisa weligeed ah taasi marka hore waxay si toos ah maskaxdeena ugu timaadaa si aan ugu damqano astaanta. Wax ku dhaca astaamaha cusub ee Jetlines kaas oo ay ku yaalliin «ukun-bariis» ama ukun-jilicsan oo qarsoon.
Si cad ayaa loo arkaa, laakiin waxaan kuu ogolaaneynaa inaad gujiso maqaalka si aad uga hesho hoosta. Sababtaas awgeed ayaan ugu laabannay tan hadaad dhoola cadeyn karto nolosha logo, maaddaama dhoolla caddayntu ay tahay mid faafa oo u horseedaysa macmiilka inuu ku nasto oo uu qaab kale kuu qaado.
Canada Jetlines waxay dhowaan la shaqaysay Cossette in la abuuro aqoonsi summad cusub oo ay kujirto astaan ​​cusub oo qarisa wax lala yaabo. Xaqiiqdii horey ayaad ugu dhacday oo waad arki kartaa wajiga dhoola cadeynta ee la sameeyay mahadnaqa labada qodob ee matoorada diyaaradda iyo qaloocaas.
Iyada oo ay shirkaddu awood u leedahay marka hore aan ogaano waxa sumadu ku saabsan tahay iyo, tan labaad, waxaan garowsanahay in dhoolla caddayntu ay jirto si nacasnimo ah noo qabato. Waana xitaa in qaabkan lagu fahmayo astaanta ay la socoto ujeedada shirkadda inay bixiso qarashyada ugu hooseeya ee duulimaadka Kanada.
Waxa astaantu sameyso waxay xaqiijineysaa wajiga xamaasada taas waa laga xanaajin karaa macmiilka markii uu tagayo bixinta qaansheegta ogowna inay ka jaban tahay intaad moodeysay. Fikraddan sidoo kale waxay hoosta ka xariiqayaan Amazon iyo astaantaas oo ah tusaalaha ugu badan ee loo qaado kuwa kale sidaasna ku kicisa dhoolla caddaynta iyo jacaylka macaamiisha mustaqbalka.
Xitaa way sii daayeen fiidiyow si loo muujiyo aqoonsiga cusub iyo sida dhoola cadeynta u calaamadeyn karto masaafada oo macaamiisheenna kor ugu qaadi doonta xamaasadeena. Ha moogaan daabicadan lagu baray muxuu u arki lahaa qaar ka mid ah Classics-ka rinjiyeynta qosol wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Markasta oo aad dhoola cadeyn karto astaantaada
Fikrad ah astaanta calaamadda kabaha ee 'Crocs' waxay siinaysaa "muuqaal" cusub